Android တွင်စကားဝှက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်အကောင်းဆုံး application ၅ ခု Androidsis
စကားဝှက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာများ၊ လူမှုကွန်ယက်များသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင် Android ဖုန်းများတွင်လိုအပ်သည့်အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်များစွာသောအရာများအတွက်စကားဝှက်များကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏အရေးပါမှုကို ထောက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ခိုင်မာသောနှင့်အမျိုးမျိုးသောစကားဝှက်များကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရမည်။ သို့သော်ဤသည်ရိုးရှင်းသောအရာမဟုတ်ပါဘူး သုံးစွဲသူများစွာသည်ကွဲပြားသောဆိုဒ်များတွင်တူညီသောစကားဝှက်များကိုအသုံးပြုကြသည်.
သင်၏လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအရာ။ သင်၏စကားဝှက်ကိုပြောင်းပြီးအများအပြားအသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါပေမဲ့၊ အားလုံးကိုမှတ်မိခြင်းဟာရှုပ်ထွေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ကံကောင်းတာကငါတို့ရှိသည် Android တွင်စကားဝှက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်အက်ပ်များ။ ဤနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
ဤအပလီကေးရှင်းများ၏ကျေးဇူးကြောင့်ပြtheနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါပြီ။ လျှောက်လွှာသို့မဟုတ် ၀ က်ဘ်စာမျက်နှာကို ၀ င်ရောက်သည့် အချိန်မှစ၍ ရိုးရှင်းစွာ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုစကားဝှက်ကိုသတိပေးရန်လျှောက်လွှာကိုအသုံးပြုရမည်။ သံသယမရှိဘဲအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ option ကို။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအမျိုးအစားအတွက်အကောင်းဆုံး Android အမျိုးအစားများကိုသင့်အားထားရှိပါသည်။
3 Password ကို Safe နှင့် Manager ကို
ဒါဟာဖြစ်နိုင်သည်ဒီ Android အမျိုးအစားကိုလူသုံးအများဆုံးသိကြတဲ့ဒီ application အမျိုးအစား။ ဤကိစ္စတွင်စကားဝှက်များကိုစက်ပေါ်တွင်သိမ်းဆည်းထားခြင်းမရှိပါ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်မိုthe်းတိမ်၌ထားရှိမည်။ ဒါကြောင့်စကားဝှက်များကိုစီမံရန်အခြားနည်းလမ်းတစ်ခု။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်သည့်စက်ပစ္စည်းမှမဆို၎င်းတို့ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည် ဒါ့အပြင် ကျနော်တို့လိုချင်သည့်အခါတိုင်းကျနော်တို့ password များကိုထပ်တူပြုခြင်း။ လျှောက်လွှာသို့မဟုတ်ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ကျွန်ုပ်တို့သွားသောအခါ၎င်းသည်အကွက်များကိုအလိုအလျောက်ဖြည့်စွက်သည်။
Android အတွက်ဤစကားဝှက်မန်နေဂျာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်း၌ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဝယ်ယူမှုကိုတွေ့သည်။
ရေးသားသူ: LogMeIn, Inc
ဒါကတစ်ခုဖြစ်တယ် စျေးကွက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးစကားဝှက်မန်နေဂျာများ။ ၎င်း၏အလုပ်မှာအသုံးပြုသူရဲ့ login အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအပိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုပေးထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ခိုးမှုနှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲသို့ဝင်, လျှောက်လွှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ကနေတိုက်ရိုက်စကားဝှက်အားလုံးကိုဖျက်ခွင့်ပြု။
Android အတွက်ဤလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ကျနော်တို့ကအတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုကိုရှာဖွေပေမယ့်။
Keeper - စကားဝှက်မန်နေဂျာ
ရေးသားသူ: Keeper လုံခြုံရေး, Inc.
Password ကို Safe နှင့် Manager ကို
Android အသုံးပြုသူများသိသောအခြားစကားဝှက်မန်နေဂျာဖြစ်သည် နှင့်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်ကောင်းသော ratings ရှိပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာ၏လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုသည်ဖော်ပြသောအခြားအပလီကေးရှင်းများနှင့်အလွန်ကွာခြားသည်မဟုတ်ပါ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်အားလုံးကိုလုံခြုံစွာနှင့်အလွယ်တကူသိမ်းထားရန်ကူညီလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၊ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိလျှင်လုံခြုံစိတ်ချရသောစကားဝှက်များကိုလည်းထုတ်ပေးသည်။ မဖြစ်မနေ ၎င်း၏ interface ကိုရိုးရှင်းကြောင်းမီးမောင်းထိုးပြသန့်ရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။
Android အတွက်ဤလျှောက်လွှာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ အတွင်း၌ရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့သည်ဝယ်ယူမှုကိုတွေ့သည်။
စကားဝှက်လုံခြုံပြီးမန်နေဂျာ - လုံခြုံတဲ့အချက်အလက်
ရေးသားသူ: ရောဘတ် Ehrhardt
Android သုံးစွဲသူများအတွက်နောက်ထပ်ကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခု။ ဤအခါသမယတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏စကားဝှက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်၊ ဤမန်နေဂျာသည်ဒေတာကိုစာဝှက်ရန်သန္နိis္ဌာန်ချထားသည်။ သင်မှတ်မိရမှာက master password တစ်ခုပါ။ ဤနည်းအားဖြင့်သင်သည်လျှောက်လွှာတွင်သင်သိမ်းဆည်းထားသောကျန်ရှိသောစကားဝှက်များကိုရယူလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ဒီသဘောမျိုးအတွက်အလွန်အဆင်ပြေ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Android အတွက်ဤစကားဝှက်မန်နေဂျာကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည်။ ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းဝယ်ယူမှုကိုရှာဖွေပေမယ့်။
ကျွန်ုပ်၏ စကားဝှက်များ - လုံခြုံသောဒေတာ
ရေးသားသူ: Erkan molla
ဒါဟာနောက်ထပ်တစ်ခုပါ စကားဝှက်မန်နေဂျာများအကြားလူသိအများဆုံးနှင့်အဆင့်အမြင့်ဆုံးရွေးစရာများ။ နောက်တဖန်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောဒီဇိုင်းနှင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောအသုံးချပရိုဂရမ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထင်ရှားသည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူအားလုံးသည်သက်သောင့်သက်သာရှိစွာဖြင့်ရွေ့လျားနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အသေးစိတ်နှင့်မည်သို့အသေးစိတ်ကိုအလွန်အမင်းအာရုံစိုက်ခြင်းအတွက်ထင်ရှားသည် အသုံးပြုသူများ၏လုံခြုံရေးနှင့် privacy ကိုကာကွယ်ပါ။ စကားဝှက်များကိုရယူရန်အတွက်လိုအပ်ချက်များကိုပြည့်မီရမည်။ ဒါကြောင့်သူစိမ်းတွေကိုသူတို့မရနိုင်အောင်တားဆီးပေးတယ်။
Dashlane - စကားဝှက်မန်နေဂျာ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Android တွင်စကားဝှက်များကိုသိမ်းဆည်းရန်အကောင်းဆုံးအက်ပလီကေးရှင်းများ
ဂျပန်ကုမ္ပဏီ၏အလယ်အလတ်တန်းစားဖြစ်သော Sharp Android One S3 ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာများ
Yahoo ကမတ်လတွင် Aviate လွှတ်တင်ရေးကိုရပ်နားတော့မည်